စီးပွားရေးသိပ္ပံပညာဆိုင်ရာ နိုဘယ်အထိမ်းအမှတ်ဆု - ဝီကီပီးဒီးယား
ဆွီဒင်အမျိုးသားဘဏ်၏ အဲလ်ဖရက် နိုဘယ်(Alfred Nobel) အထိမ်းအမှတ် စီးပွားရေးသိပ္ပံပညာဆိုင်ရာဆု (အင်္ဂလိပ်: The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel)(ဆွီဒင်: Sveriges riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne)သည် နိုဘယ်ဖောင်ဒေးရှင်းမှ ကမကထပြု၍ ချီးမြှင့်သော စီးပွားရေးပညာဆိုင်ရာဆု ဖြစ်ပြီး၊ ယေဘုယျအားဖြင့် စီးပွားရေးပညာဆိုင်ရာနိုဘယ်ဆုအဖြစ် မှတ်ယူကြသည်။ ဤဆုကို ၁၉၆၈-ခုနှစ်တွင် ဆွီဒင်နိုင်ငံ၏ ဗဟိုဘဏ်ဖြစ်သော ဆွီဒင်အမျိုးသားဘဏ် (Sveriges Riksbank)မှ နိုဘယ်ဖောင်ဒေးရှင်းသို့ ဘဏ်၏ နှစ်-၃၀၀ပြည့် အထိမ်းအမှတ် လှူဒါန်းငွေဖြင့် စတင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ၁၈၉၅-ခုနှစ်မှ အဲလ်ဖရက် နိုဘယ်(Alfred Nobel)၏ သေတမ်းစာတွင် ရေးသားထားသည့် စာရင်းတွင်ပါဝင်သည့် ဆုတစ်ခု မဟုတ်သဖြင့် နိုဘယ်ဆုမဟုတ်ပေ။ သို့သော်လည်း ဤဆုကို နိုဘယ်ဆုများနှင့် အတူတွဲ၍ နိုဘယ်ဖောင်ဒေးရှင်းမှ ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲမှု ပြုသည်။ ဆုရရှိသူစာရင်းကို နိုဘယ်ဆုရှင်များနှင့်အတူ ပေါင်း၍ကြေငြာပြီး၊ နိုဘယ်ဆုပေးပွဲ အခမ်းအနားတစ်ခုတည်း၌ပင် ပေါင်း၍ ဆုချီးမြှင့်သည်။
ဆွီဒင်အမျိုးသားဘဏ်၏ အဲလ်ဖရက် နိုဘယ်(Alfred Nobel) အထိမ်းအမှတ် စီးပွားရေးသိပ္ပံပညာဆိုင်ရာဆု
စီးပွားရေးပညာ(Economics) သို့မဟုတ် လူမှုသိပ္ပံပညာရပ်များ(Social Sciences)တွင် ထူးချွန်ပြောင်မြောက်သော စွမ်းဆောင်ချက်များအတွက် ချီးမြှင့်ခြင်း
တော်ဝင်ဆွီဒင်သိပ္ပံအကယ်ဒမီ(Royal Swedish Academy of Sciences)
၉ သန်း SEK (၂၀၁၇)
Abhijit Banerjee, Esther Duflo and Michael Kremer (၂၀၁၉)
တော်ဝင်ဆွီဒင်သိပ္ပံအကယ်ဒမီ(Royal Swedish Academy of Sciences)မှ ဤဆုရှင်များကို ရွေးချယ်သည်။ (ဓာတုဗေဒနှင့် ရူပဗေဒနိုဘယ်ဆုများကိုလည်း ဤအကယ်ဒမီမှပင် ရွေးချယ်သည်။) ပထမဆုံးဆုကို ၁၉၆၉-ခုနှစ်တွင် ဒတ်ခ်ျစီးပွားရေးပညာရှင် Jan Tinbergenနှင့် နော်ဝေစီးပွားရေးပညာရှင် Ragnar Frischတို့အား "စီးပွားရေးဖြစ်စဉ်များအားဆန်းစစ်ခြင်းအတွက်အသုံးပြုသော အခြေအနေအလိုက် ပြောင်းလဲနိုင်သော မော်ဒယ်များ(dynamic models)တီထွင်အသုံးချခြင်း"အတွက် ချီးမြှင့်ခဲ့သည်။
ဤဆု၏ ဆွီဒင်ဘာသာစကားဖြင့် လက်ရှိတရားဝင်အမည်မှာ Sveriges riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne ဖြစ်သည်။ နိုဘယ်ဖောင်ဒေးရှင်းမှ ဤဆု၏အမည်ကို အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် ဘာသာပြန်ဆိုရာတွင် နှစ်အလိုက် ပြောင်းလဲမှုများရှိနေသည်ကို အောက်ပါဇယားတွင် တွေ့ရှိနိုင်သည်။
ဆွီဒင်မှ အင်္ဂလိပ်သို့ ဘာသာပြန်ပုံ
↑ Nobel Prize amount is raised by SEK 1 million။ Nobelprize.org။
↑ Hart and Holmström awarded the Prize in Economic Sciences for 2017။ Sveriges Riksbank (10 October 2016)။ 25 August 2018 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Prize in Economic Sciences။ The Royal Swedish Academy of Sciences။ 25 August 2018 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Beslut om titel på ekonomipriset [Resolution on the economics prize's name] (in Swedish)။ Sveriges Riksbank (6 July 2006)။ 20 August 2018 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၅.၀ ၅.၁ Nobel Prize။ Encyclopædia Britannica (2007)။ 29 November 2018 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel။ Sveriges Riksbank။5March 2013 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 12 December 2012 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ “Sveriges Riksbank’s Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel was established withadonation to the Nobel Foundation in connection with the Riksbank’s 300th anniversary in 1968.”
↑ The Nobel Prize။ နိုဘယ် ဖောင်ဒေးရှင်း။7November 2007 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ “In 1968, Sveriges Riksbank established The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel, founder of the Nobel Prize.”
↑ ၈.၀ ၈.၁ The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel။ နိုဘယ် ဖောင်ဒေးရှင်း။7November 2007 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ “In 1968, Sveriges Riksbank (Sweden's central bank) established this Prize in memory of Alfred Nobel, founder of the Nobel Prize.”
↑ NotaNobel Prize။ The Nobel Foundation။ 25 August 2018 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Organization Structure: Spreading Information About the Nobel Prize။ နိုဘယ် ဖောင်ဒေးရှင်း။ 2014-11-26 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၁၁.၀ ၁၁.၁ "Nominating and awarding", in "Prize in Economic Sciences", Royal Swedish Academy of Sciences. Retrieved July 04, 2017.
↑ [[:en:Nobel Prize|]]
↑ Lundberg၊ Erik (10 December 1969)။ The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1969: Presentation Speech။ နိုဘယ် ဖောင်ဒေးရှင်း။ 17 October 2007 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Lindbeck၊ Assar (10 December 1970)။ The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1970: Presentation Speech။ နိုဘယ် ဖောင်ဒေးရှင်း။ 17 October 2007 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Ohlin၊ Bertil (10 December 1971)။ The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1971: Presentation Speech။ နိုဘယ် ဖောင်ဒေးရှင်း။ 17 October 2007 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1972: Press Release။ နိုဘယ် ဖောင်ဒေးရှင်း (25 October 1972)။ 17 October 2007 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1973: Press Release။ နိုဘယ် ဖောင်ဒေးရှင်း (18 October 1973)။ 17 October 2007 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1975: Press Release။ နိုဘယ် ဖောင်ဒေးရှင်း (14 October 1975)။ 17 October 2007 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1976: Press Release။ နိုဘယ် ဖောင်ဒေးရှင်း (14 October 1976)။ 17 October 2007 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1977: Press Release။ နိုဘယ် ဖောင်ဒေးရှင်း (14 October 1977)။ 17 October 2007 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1978: Press Release။ နိုဘယ် ဖောင်ဒေးရှင်း (16 October 1978)။ 17 October 2007 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1981: Press Release။ နိုဘယ် ဖောင်ဒေးရှင်း (13 October 1981)။ 17 October 2007 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1982: Press Release။ နိုဘယ် ဖောင်ဒေးရှင်း (20 October 1982)။ 17 October 2007 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1983: Press Release။ နိုဘယ် ဖောင်ဒေးရှင်း (17 October 1983)။ 17 October 2007 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1984: Press Release။ နိုဘယ် ဖောင်ဒေးရှင်း (18 October 1984)။ 17 October 2007 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1990: Press Release။ နိုဘယ် ဖောင်ဒေးရှင်း (16 October 1990)။ 17 October 2007 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1991: Press Release။ နိုဘယ် ဖောင်ဒေးရှင်း (15 October 1991)။ 17 October 2007 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1992: Press Release။ နိုဘယ် ဖောင်ဒေးရှင်း (13 October 1992)။ 17 October 2007 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2005: Press Release။ နိုဘယ် ဖောင်ဒေးရှင်း (10 October 2005)။ 17 October 2007 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2006: Press Release။ နိုဘယ် ဖောင်ဒေးရှင်း (9 October 2006)။ 17 October 2007 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2007: Press Release။ နိုဘယ် ဖောင်ဒေးရှင်း (15 October 2007)။ 17 October 2007 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=စီးပွားရေးသိပ္ပံပညာဆိုင်ရာ_နိုဘယ်အထိမ်းအမှတ်ဆု&oldid=623574" မှ ရယူရန်
၂၉ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၀၊ ၀၃:၃၁ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၂၉ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၀၊ ၀၃:၃၁ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။